ओलीको कदमको विरोधमा रहेको माधव नेपाल पक्षले बोलायो भेला – Nepal Online Khabar
March 13, 2021 131
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनोमानी ढंगले पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि रुष्ट बनेको माधव नेपाल समूहले शनिबार केन्द्रीय समिति र सांसदहरुको भेला बोलाएको छ । भेलामा ओलीको कदमपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिने नेताहरुले बताएका छन् ।
शुक्रबार बैठक राखेर ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट चुनिएका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु पदाधिकारीहरूको पद खारेज खारेज गर्नुका साथै जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । यस्तै माओवादीमा नफर्किएका रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरुलाई ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुका साथै जिम्मेवारी समेत दिएका छन् ।
ओलीको यो निर्णयपछि रुष्ट बनेको नेपाल समूहले चैत ४ गतेका लागि राष्ट्रिय भेला समेत बोलाइसकेको छ भने समानान्तर कमिटी बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । ओलीले पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबार कदम चालेको भन्दै नेपाल समूहले निर्णय विरुद्ध एकजुट हुन
कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेको छ ।एमाले नेता भीम रावलले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधान विपरित स्वेच्छाचारी र मनपरी किसिमले निर्णय गरेकाले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने कदमविरुद्ध सबैलाई एकताबद्ध गरेर पार्टीको रक्षाका लागि अग्रसर हुने बताए ।
ओलीबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धरासायी पार्ने काम भएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा अध्यक्षले विधान विपरित काम गर्न नमिल्ने रावलको तर्क छ । ओलीको पछिल्लो निर्णय अलोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट एकता विरोधी भएको उनको टिप्पणी छ ।
Prevजसपा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादवले बाजी मार्लान् कि महन्थ ठाकुरले ?
Nextसरकारले चाहँदैमा रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुन कठिन
दसैं अर्को बर्ष पनि आउँछ यो वर्षचाहिँ जहाँ छौं त्यहीं बसेर मनाऔं : स्वास्थ्य मन्त्रालय…हेर्नुहोस् ।
मेरो थोत्रो ज्याकेट देखेर प्रचण्ड र बाबुरामलाई लज्जाबाेध भएछ, आफैलाई बेस्सरी सरापेँ : पूर्वमन्त्री विष्टमगर…पुरा पढ्नुहोस ।
ग्यास्ट्रिकका बिरामीले बिर्सिएर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र क्यान्सर हुने खतरा ! पूरा पढी जानकारीको लागि सेयर गर्नुहोस् ।